Lady Gaga ကို မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ရတဲ့ ‘A Star Is Born(2018)’ Trailer
Lady Gaga ကို မမှတ်မိနိုင်လောက်တဲ့ ပုံစံနဲ့ တွေ့ရမယ့် ‘A Star Is Born(2018)’ Trailer
7 Jun 2018 . 10:56 AM
Lady Gaga လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန်နဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ဖောက်ခဲ့သူ၊ သူ့ရဲ့ ဂီတတင်မဟုတ်ဘဲ သူ့ရဲ့ ဖက်ရှင်တွေကလည်း သူများနဲ့ မတူ ကွဲထွက်လွန်းလို့ အဝေဖန်တောင်ခံရဖူးသူပါ။ အခုတော့ အရင်ကနဲ့မတူ ပိုပြီးတော့ ရိုးရှင်းလာတာကိုတွေ့ရပြီး ဂီတလမ်းကြောင်းကို မှန်မှန်ချီတက်နေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
‘A Star Is Born’ ဇာတ်ကားထဲက Lady Gaga
အခုတော့ Lady Gaga အတွက် နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Musical Romantic Drama ဇာတ်ကားတစ်ခုမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပါတော့မယ်။ သူပါဝင်မယ့် ဇာတ်ကားကတော့ ‘A Star Is Born’ ဖြစ်ပြီး Bradley Cooper က ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်နေရာမှာလည်း Bradley Cooper က Jackson Maine အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပြီး Jackson Maine ရဲ့ တွဲဘက် ကောင်မလေး Ally နေရာကနေ Lady Gaga က သရုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားဟာ တတိယအကြိမ်မြောက်ပြန်လည်ရိုက်ကူးတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ပထမအကြိမ်က ၁၉၅၄ ခုနှစ်မှာ Judy Garland နဲ့ James Mason တို့ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ထားတာ ဖြစ်ပြီး ဒုတိယအကြိမ်ကတော့ ၁၉၇၆ ခုနှစ်မှာ Barbra Streisand နဲ့ Kris Kristofferson တို့ သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာ တွေ့ရတဲ့ Lady Gaga
Trailer ထွက်တာတော့ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့မှ ဖြစ်ပြီး YouTube မှာ Tranding No.3ဖြစ်နေပါပြီ။ Trailer ကို စကြည့်လိုက်လို့ Lady Gaga စထွက်လာတဲ့အခန်းမှာ Wow လို့ ဖြစ်မိမှာပါ။ Lady Gaga ဟာ လုံးဝအသွင်တစ်မျိုးပြောင်းသွားပြီး အရင်က Lady Gaga လို့ မမှတ်မိနိုင်အောင် ဖြစ်ရပါတယ်။ Lady Gaga မှန်းသိပေမယ့် လုံးဝပုံစံပြောင်းသွားပြီး Ally နေရာက စီးဝင်ခံစားရတာမျိုးပေ့ါ။
Gaga ဟာ Trailer မှာ နာမည် Credit ထိုးတဲ့အခါ Lady Gaga ဆိုတဲ့ နာမည်ကို မသုံးဘဲ Stefani Germanotta ဆိုတဲ့ နာမည်အရင်းကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားအတွက် သူမကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်လည်း ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပြီး The Shallow ဆိုတဲ့သီချင်းကို Mark Ronson နဲ့ ပူးတွဲပြီး ဒီရုပ်ရှင်အတွက် ရေးသားထားပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားမှာ စိတ်ဝင်စားစရာအချက်တွေအများကြီးရှိသေးပြီး အစတုန်းက ဒီဇာတ်ကားကို Beyonce’ နဲ့ ရိုက်ဖို့ စိတ်ကူးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ဝန်ရှိလာတဲ့ Beyonce’ ကြောင့် နှောင့်နှေးခဲ့ရပါတယ်။ မင်းသားနေရာအတွက်လည်း Leonardo DiCaprio ၊ Will Smith ၊ Christian Bale တို့နဲ့ ရိုက်ဖို့ စကားပြောခဲ့ပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ Tom Cruise နဲ့လည်း စကားပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ Johnny Depp ကတော့ ဒီဇာတ်ကားကို ငြင်းပယ်လိုက်တဲ့အတွက် နောက်ဆုံးအပြီးသတ်မှာ Lady Gaga နဲ့ Bradley Cooper နဲ့ ရိုက်ဖို့ ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။
ရိုက်ကွင်းပေါ်က Lady Gaga
ဒီဇာတ်ကားကို အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့ ရုံတင်ပြသဖို့ လျာထားပြီး Lady Gaga ရဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမျက်နှာလေးနဲ့ Ally ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုကို တွေ့မြင်ချင်ရင်တော့ Trailer လေးနဲ့ ဖြေသိမ့်ထားရမှာပါ။
Lady Gaga ကို မမှတျမိနိုငျလောကျတဲ့ ပုံစံနဲ့ တှရေ့မယျ့ ‘A Star Is Born(2018)’ Trailer
Lady Gaga လို့ ဆိုလိုကျတာနဲ့ ကိုယျပိုငျဟနျနဲ့ လမျးကွောငျးတဈခုကို ဖောကျခဲ့သူ၊ သူ့ရဲ့ ဂီတတငျမဟုတျဘဲ သူ့ရဲ့ ဖကျရှငျတှကေလညျး သူမြားနဲ့ မတူ ကှဲထှကျလှနျးလို့ အဝဖေနျတောငျခံရဖူးသူပါ။ အခုတော့ အရငျကနဲ့မတူ ပိုပွီးတော့ ရိုးရှငျးလာတာကိုတှရေ့ပွီး ဂီတလမျးကွောငျးကို မှနျမှနျခြီတကျနသေူလညျး ဖွဈပါတယျ။
‘A Star Is Born’ ဇာတျကားထဲက Lady Gaga
အခုတော့ Lady Gaga အတှကျ နောကျထပျစိနျချေါမှုတဈခုဖွဈတဲ့ Musical Romantic Drama ဇာတျကားတဈခုမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျပါတော့မယျ။ သူပါဝငျမယျ့ ဇာတျကားကတော့ ‘A Star Is Born’ ဖွဈပွီး Bradley Cooper က ရိုကျကူးထားပါတယျ။ သရုပျဆောငျနရောမှာလညျး Bradley Cooper က Jackson Maine အဖွဈပါဝငျသရုပျဆောငျမှာ ဖွဈပွီး Jackson Maine ရဲ့ တှဲဘကျ ကောငျမလေး Ally နရောကနေ Lady Gaga က သရုပျဆောငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီဇာတျကားဟာ တတိယအကွိမျမွောကျပွနျလညျရိုကျကူးတဲ့ ဇာတျကားဖွဈပွီး ပထမအကွိမျက ၁၉၅၄ ခုနှဈမှာ Judy Garland နဲ့ James Mason တို့ တှဲဖကျသရုပျဆောငျထားတာ ဖွဈပွီး ဒုတိယအကွိမျကတော့ ၁၉၇၆ ခုနှဈမှာ Barbra Streisand နဲ့ Kris Kristofferson တို့ သရုပျဆောငျထားတာဖွဈပါတယျ။
ရိုကျကှငျးပျေါမှာ တှရေ့တဲ့ Lady Gaga
Trailer ထှကျတာတော့ ဇှနျလ ၆ ရကျနမှေ့ ဖွဈပွီး YouTube မှာ Tranding No.3ဖွဈနပေါပွီ။ Trailer ကို စကွညျ့လိုကျလို့ Lady Gaga စထှကျလာတဲ့အခနျးမှာ Wow လို့ ဖွဈမိမှာပါ။ Lady Gaga ဟာ လုံးဝအသှငျတဈမြိုးပွောငျးသှားပွီး အရငျက Lady Gaga လို့ မမှတျမိနိုငျအောငျ ဖွဈရပါတယျ။ Lady Gaga မှနျးသိပမေယျ့ လုံးဝပုံစံပွောငျးသှားပွီး Ally နရောက စီးဝငျခံစားရတာမြိုးပေ့ါ။
Gaga ဟာ Trailer မှာ နာမညျ Credit ထိုးတဲ့အခါ Lady Gaga ဆိုတဲ့ နာမညျကို မသုံးဘဲ Stefani Germanotta ဆိုတဲ့ နာမညျအရငျးကို အသုံးပွုထားပါတယျ။ ဒီဇာတျကားအတှကျ သူမကိုယျတိုငျရေးထားတဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျလညျး ပါဝငျမှာ ဖွဈပွီး The Shallow ဆိုတဲ့သီခငျြးကို Mark Ronson နဲ့ ပူးတှဲပွီး ဒီရုပျရှငျအတှကျ ရေးသားထားပါတယျ။
ဒီဇာတျကားမှာ စိတျဝငျစားစရာအခကျြတှအေမြားကွီးရှိသေးပွီး အစတုနျးက ဒီဇာတျကားကို Beyonce’ နဲ့ ရိုကျဖို့ စိတျကူးခဲ့တာ ဖွဈပွီး ကိုယျဝနျရှိလာတဲ့ Beyonce’ ကွောငျ့ နှောငျ့နှေးခဲ့ရပါတယျ။ မငျးသားနရောအတှကျလညျး Leonardo DiCaprio ၊ Will Smith ၊ Christian Bale တို့နဲ့ ရိုကျဖို့ စကားပွောခဲ့ပမေယျ့ မအောငျမွငျခဲ့ပါဘူး။ Tom Cruise နဲ့လညျး စကားပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။ Johnny Depp ကတော့ ဒီဇာတျကားကို ငွငျးပယျလိုကျတဲ့အတှကျ နောကျဆုံးအပွီးသတျမှာ Lady Gaga နဲ့ Bradley Cooper နဲ့ ရိုကျဖို့ ဖွဈလာခဲ့တာပါ။
ရိုကျကှငျးပျေါက Lady Gaga
ဒီဇာတျကားကို အမရေိကနျနိုငျငံမှာ အောကျတိုဘာလ ၅ ရကျနေ့ ရုံတငျပွသဖို့ လြာထားပွီး Lady Gaga ရဲ့ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးမကျြနှာလေးနဲ့ Ally ဆိုတဲ့ သရုပျဆောငျမှုကို တှမွေ့ငျခငျြရငျတော့ Trailer လေးနဲ့ ဖွသေိမျ့ထားရမှာပါ။